सुन्तला जोन गुल्मीमा यस बर्ष २५ करोड बढिको सुन्तला || Nepal Sandes
सुन्तला जोन गुल्मीमा यस बर्ष २५ करोड बढिको सुन्तला
प्रेम सुनार २०७५ मंसिर १४
बुटवल, मंसिर १५ । सरकारद्धारा सुन्तला जोन जिल्ला घोषणा भई सकेको गुल्मीमा गत वर्ष भन्दा यस बर्ष सुन्तला उत्पादनमा बृद्धि भएको आंकलन कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले गरेको छ । ‘ यस बर्ष उत्पादन भएको पुरै सुन्तला बजारमा त आई पुगेको छैन, –त्यस केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत तनबहादुर रानाले भने–‘ कुल क्षेत्रफलमा उत्पादित सुन्तलाको आंकलन गर्दा २५ करोड भन्दा बढिको सुन्तला यस बर्ष गुल्मीमा उत्पादन भएको हाम्रो आँकलन रहेको छ ।’
सो केन्द्रको आंकलन अनुसार गुल्मीमा १२ सय ९७ हेक्टर सुन्तलला उत्पादनको क्षेत्र मध्ये उत्पादनशिल ६ सय ६० हेक्टरमा ९. ८ मेट्रिकटन यस बर्ष सुन्तताला उत्पादन भएको छ । त्यसलाई न्युनतम प्रति किलो ४० रुपैयाँका दरले जोड्दा २५ करोड ८७ लाख २० हजार रुपैयाँको सुन्तला यस बर्ष गुल्मीमा उत्पादन भएको छ ।
खुद्रा बजारमा भने सुन्तलाको भाउ प्रति किलो ८० रुपैयाँ सम्म रहेको छ । कृषि प्रसार अधिकृत रानाका अनुसार हालै सुन्तला जोन क्षेत्र निर्धारण समेत भई सकेका जिल्लाकोे मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ९ अर्लाङ्गकोटमा ५० हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन भएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ८० हेक्टर रहेको छ ।
रुरु गाउँपालिकाको बलेटक्सारमा १० हेक्टरमा उत्पादन भएको छ । त्यहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ३० हेक्टर रहेको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको दिगाममा १ सय २० हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल २ सय ४० हेक्टर रहेको छ । गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको गौडाकोटमा ५० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ भने त्यहाँ सम्भावित क्षेत्रफल १ सय हेक्टर रहेको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको धुर्कोटरजस्थलमा ४० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ७० हेक्टर रहेको छ । रजस्थल कै अर्को स्थानमा १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यस स्थानमा १ सय ५० हेक्टरमा सभवित क्षेत्रफल रहेको छ । सोही गाउँपलिकाको नयाँगाउँमा २ सय २५ हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ ।
जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल क्षेत्रफल ३ सय हेक्टर रहेको छ । सोही गाउँपालिकाको पिपलधारामा १ सय ३८ हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल २ सय हेक्टर रहेको छ । सो गाउँपालिकाको पिपलधारामा १ सय ३८ हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल २ सय हेक्टर रहेको छ । हाडहाडेमा १ सय २९ हेक्टरमा उत्पादनत हुँदै आएको छ । जहाँ २ सय २० हेक्टर सम्भावित क्षेत्रफल रहेको छ । जैसीथोकमा १० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल २० हेक्टर रहेको छ ।
मदाने गाउँपालिकाको भनभनेमा ३० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँको क्षेत्रफल ४० हेक्टर रहेको छ । सोही गाउँपालिकाको पुर्कोटदहमा १० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ ३० हेक्टर सम्भावित क्षेत्रफल रहेको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाको वाग्लामा १५ हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ३० हेक्टर रहेको छ ।
गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको वलिथुुममा १५ हेक्टरमा उत्पादन र सम्भावित क्षेत्रफल ३० हेक्टर रहेको छ । कालिगण्डकी गाउँपालिकाको भुर्तङ्गमा १० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ भने त्यहाँँ सम्भावित क्षेत्रफल ३५ हेक्टर रहेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्वर ३ भाडगाउँ, वडा नम्वर ४ को अर्खले , ५ को वालकाटे र वडा नमवर ६ को गुरुङ्ग गाउँ लगायतका स्थानमा १ सय ९० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँको सम्भावित क्षेत्रफल ३ सय हेक्टर रहेको छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको हरेवामा ४० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ८५ हेक्टर रहेको छ । कालिगण्डकी गाउँपलिकाको जयखानीमा ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सय हेक्टर क्षेत्रफल सम्भावित रहेको छ । सोही गाउँपालिकाको अर्वेनीमा २० हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ ६० हेक्टर सम्भावित क्षेत्रफल रहेको छ ।
छत्रकोट गाउँपालिका कै अर्को पकेट क्षेत्र हर्दिनेटामा मा १ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ २ सय हेक्टर क्षेत्रफल सम्भावित क्षेत्रफल रहेको छ । छत्रकोट कै हुँगामा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ५० हेक्टर रहेको छ । मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्वर ८ वामीमा १५ हेक्टरमा उत्पादन हुँदै आएको छ । जहाँ सम्भावित क्षेत्रफल ३० हेक्टर रहेको छ । गुल्मीदरवारको विरबासमा ५० हेक्टरमा सुन्ताला उत्पादन हुँदै आएको छ ।
जहाँ ८५ हेक्टर सम्भावित क्षेत्रफल रहेको छ । सोही गाउँपालिकाको राजामा ३० हेक्टरमा उत्पादन र ६० हेक्टर सम्भावित क्षेत्रफल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तला जोन कार्यान्वन ईकाई गुल्मी मार्फत सुन्तलाको उत्पादन , बृद्धि उन्नत र आधुकि प्रविधी उपलब्ध गराउन यो पहिलो बर्षमा सुन्तला जोन निर्धारित क्षेत्रका लागि ८१ लख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोृजन भई आएको त्यस ईकाईका कृषि अधिकृत निर्मल पौड्यालले जानकारी दिए । कृषि ज्ञान केन्दं्र गुल्मीका प्रमुख चक्रपाणी पन्थीले पनि कृषि प्रसार फाँटले तयार पारेको विवरण कै सोरोफोरमा यस बर्ष गुल्मीमा सुन्तलाको उत्पादनमा बृद्धि भएको बताए ।
सुन्तलाको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र नहुँदा कृषकहरु ीवचौलियाको मारमा पर्दैं आएका छन । गुल्मीबाट निर्वाचित संघिय सरकारका दुई मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली, गोकर्णराज बिष्ट , प्रदेृश सरकारका मन्त्री सुदर्शन वराल र यहाँबाट निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधीहरुले चिस्यान केन्द्र खोल्दै र उचित बजार ब्यवस्थापन गर्दै कृषक स्वयमले नै मुनाफा आर्जन गर्ने बातवरण मिलाउने बताउँदै र पहल गर्दै पनि आएका छन ।
छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी , प्रमुख सचिव डाक्टर तीर्थराज ढकाल, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदी, उपप्रमुख गोमादेवि आचार्य सहित वडाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
वृक्षारोपण गरि ४५ औं विश्व वातावरण दिवस गुल्मीमा सम्पन्न
२०७६ जेष्ठ २२
सहकारीकै माध्यम बाट देश लाई समृध्दी:मेयर शोमनाथ सापकोटा
मुसिकोट नगरपालिका९ददल्कामा जिप दुर्घटना!
गुल्मिमा आलु खेती मौलाउदै , आलुखेती गर्दा र भित्राउदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
२०७५ पुष १०